Endrik'io pejy io tamin'ny 12 Oktobra 2018 à 16:48
Endrik'io pejy io tamin'ny 12 Oktobra 2018 à 16:46 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 12 Oktobra 2018 à 16:48 (hanova) (esory)
Notsipahin'ny mpivory tamin'ny Konsily voalohany tao Nikea tamin'ny taona 325 ny doketisma. Taty aoriana dia nanameloka ny doketisma ny Konsily tao Kelkedona tamin'ny taona 451. Ny [[Fiangonana Katolika]] sy ny Fiangonana Ortodoksa Tatsinanana sy ny [[Fiangonana Ortodoksa Koptan'i Aleksandria]] ary ny [[Fiangonana ortodoksa teoahedo|Fiangonana Ortodoksa Teoahedo]] dia manao ny doketisma ho fampianaran-diso. Manao torak'izany koa ny ankamaroan'ny fiangonana kristiana hafa izay nandray ny fehin-kevitr'ireo [[Konsily|konsili]]<nowiki/>n'ny Fiangonana tany aloha. ▼
▲Notsipahin'ny mpivory tamin'ny Konsily voalohany tao Nikea tamin'ny taona 325 ny doketisma. Taty aoriana dia nanameloka ny doketisma ny Konsily tao Kelkedona tamin'ny taona 451. Ny [[Fiangonana Katolika]] sy ny Fiangonana Ortodoksa Tatsinanana sy ny [[Fiangonana Ortodoksa Koptan'i Aleksandria]] ary ny [[Fiangonana ortodoksa teoahedo|Fiangonana Ortodoksa Teoahedo]] dia manao ny doketisma ho fampianaran-diso. Manao torak'izany koa ny ankamaroan'ny fiangonana kristiana hafa izay nandray ny fehin-kevitr'ireo [[Konsily|konsili]]<nowiki/>n'ny Fiangonana tany aloha.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/883751"